कति पानीको मात्रा शरीरका लागि हानिकारक ?
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकति पानीको मात्रा शरीरका लागि हानिकारक ?
विराटनगर/शरीरको ६० प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ ।
शरीरको आन्तरिक कार्यलाई सुचारु राख्न दिनभरि प्रशस्त पानी पिउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । पानीले कोषमा पोषक तत्व बोक्न, विष हटाउन, तापक्रम नियमित गर्न र शरीरलाई खनिज, भिटामिन, अमिनो एसिड, ग्लूकोज र अन्य पदार्थ समाहित गर्न तथा आत्मसात गर्न अनुमति दिन्छ । स्वस्थ र फिट रहनका लागि प्रत्येक दिन कम्तिमा दुईदेखि तीन लिटर पानी पिउन सिफारिस गरिन्छ ।
स्वास्थ्यका लागि पानी चाहिने भए पनि अत्यधिक पानीले गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुन सक्छ । कति पानी धेरै हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर धेरै कारकमा निर्भर हुने गर्छ । अत्यधिक पानी पिउँदा मृगौलाले सजिलै बढी पानी निष्कासन गर्न सक्छ । तर, अन्य आन्तरिक अङ्गमा सीमितता हुन्छ । मृगौलाले एक घण्टामा एक लिटर पानी मात्र निकाल्न सक्छ ।
पानी पिउने गतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । धेरै छिटो पानी पिउने मानिसको मृगौलामा अधिक भार हुन्छ जसकारण अन्य कार्य गर्न सक्षम हुँदैनन् । छोटो अवधिमा तीनदेखि चार लिटर पानी पिउँदा सजिलै हाइपोनाट्रेमिया (शरीरमा सोडियमको एकाग्रता घट्ने) हुन सक्छ । २००४ मा नेशनल एकेडेमी अफ मेडिसिनले १९ देखि ३० वर्ष उमेरका महिलालाई प्रतिदिन २.७ लिटर पानी र समान उमेरका पुरुषलाई ३.७ लिटर पानी पिउन सल्लाह दिएको छ ।
मानव शरीरको रगतमा केही मात्रामा सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड र म्याग्निसियमलगायतका इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिन्छ जसले मांसपेशी सङ्कुचन गर्न, स्नायु प्रणालीको कार्य र शरीरको एसिड–बेस स्तर जाँचमा राख्न मद्दत गर्छ । अत्यधिक पानी सेवनले शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको अनुपात असन्तुलित गर्न सक्छ ।
शरीरमा सोडियमको कम स्तरले हाइपोनाट्रेमिया निम्त्याउन सक्छ र लक्षणहरूमा थकान, कमजोरी, अस्थिरता, चिढचिढ, भ्रम हुन सक्छ । सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा, पानीको इनटक्सिकेसन वा पानी विषाक्तता (पोइजनिङ) पनि निम्त्याउन सक्छ । यस अवस्थामा, शरीरमा सोडियमको स्तर धेरै कम हुन्छ । सोडियमविना कोशिकाभित्र तरलताको सन्तुलन नियमित गर्न मस्तिष्क सुन्निन सक्छ ।
जटिलताको स्तरमा निर्भर गर्दै पानीको इनटक्सिकेसनले व्यक्ति कोमामा जाने वा मृत्युसमेत हुन सक्छ । मृर्गौला शरीरबाट अधिक पानी हटाउन सक्षम छ । तर, छोटो समयमा धेरै पानी पिउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सन्तुलन कायम राख्न कोसिस गर्नुका साथै एक दिनमा ३.५ लिटरभन्दा बढी पानी पिउनु हुँदैन । कुनै पनि किसिमका मृगौला रोगबाट पीडित व्यक्तिले यस बारेमा बढी सावधान अपनाउनु पर्छ ।